Fihenam-bidy EPS savoka fitiliana fantsom-bokatra fanamboarana sy orinasa | XiongYe
Fantsom-bokatra fitsapana rà EPS
Niorina tamin'ny taona 1998, XIONGYE dia namorona lasitra fantsom-bozaka vita amin'ny fantsom-bokatra ra nahomby voalohany ary nahomby ny tsipika famokarana mandeha ho azy. Mifantoka hatrany amin'ny fonosana EPS mandritra ny 20 taona izahay. Amin'ny maha-mpanamboatra loharano, XIONGYE mamatsy fantsom-bokatra fanangonana ra misy kalitao avo sy vidiny tsara izay nanjary safidy nisafidy ho an'ny mpanjifa eran-tany maherin'ny 100.
EPS - fantatra koa amin'ny hoe polystyrene nitarina - dia vokatra fonosana maivana vita amin'ny vakana polystyrene nitarina. Na dia maivana be aza ny lanjany, dia mateza maharitra sy matanjaka ara-drafitra izy io, manome onjam-peo mahazaka fanoherana sy fidirana hatairana ho an'ny vokatra maro karazana natao ho an'ny fandefasana. EPS foam dia safidy tsara hafa amin'ny fitaovana fonosana mahazatra. Ny fonosana EPS foam dia ampiasaina amin'ny indostrialy, serivisy sakafo, ary fampiharana fanorenana, ao anatin'izany ny fonosana sakafo, fandefasana entana marefo, fonosana amin'ny solosaina sy fahitalavitra, ary fandefasana vokatra amin'ny karazany rehetra.
Ny valin'ny fantsom-boaloboka dia vita amin'ny busa fotsy fotsy avo lenta, ary manana endrika lehibe amin'ny fitrohana ny hatairana, lanja maivana, hamandoana, porofon-drano ary fampisehoana an-tsoroka.
Ity fantsom-boaloboka EPS ity dia ampiasaina hanangonana ny fantsom-panangonana rà mandriaka, mety ho an'ny milina famonosana mandeha ho azy mba hanangonana fantsona fanangonana rà banga. Nampiasaina tany amin'ny toeram-pitsaboana sy hopitaly izy io.
Ny fiasan'ny fantsom-pandrefesana dia ny mitazona ny fantsom-panadinana ary mitazona azy ireo amin'ny toerana azo antoka nefa tsy voatanan'ny tanana.
Fampiharana: fantsom-pandrefesana Centrifuge, fantsom-panangonana ra-banga, fantsom-panangonana rà tsy misy fantsom-batana, fantsom-panandramana R1.6, fantsona centrifuge Conical sns.
Misy savaivony misy: 8.4mm, 9.1mm, 12mm, 10mm, 10.8mm, 13.3mm 13mm, 14mm, 14.6mm, 15mm, 16mm
Fantsakana 50 sy lavadrano 100 no be mpitia indrindra. Ankoatry ny habeny ankehitriny, ny habeny sy ny fombany namboarina dia misy ihany koa! Tongasoa eto amin'ny fanadihadiana.
Previous: Kitapo fonosana EPS
Manaraka: Boaty EPS Foam